१३ औं साग: आज २१ स्वर्णको छिनोफानो हुँदै, नेपालको भागमा कति ? – News Portal of Global Nepali
१३ औं साग: आज २१ स्वर्णको छिनोफानो हुँदै, नेपालको भागमा कति ?
04/12/2019 मा प्रकाशित
काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत आज १७ खेल हुँदैछन् । जसले २१ स्वर्णको छिनोफानो गर्नेछ । आज एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, महिला र पुरुषको क्रिकेट, साइकलिङ, महिला र पुरुषको फुटबल, गल्फ, ह्याण्डबल, कबड्डी, कराते, खोखो, सुटिङ, टेबल टेनिस, टेनिस, तेक्वान्दो, ट्रायाथलन र उसुका खेल हुँदैछन् ।
एथलेटिक्समा तीन स्वर्णको फाइनल हुँदैछन् । महिला र पुरुषको लंग जम्प, हाई जम्प र डिक्कस थ्रोका फाइनल हुँदैछन् भने आठ सय मिटर दौड, दुई सय मिटर दौड र ४०० मिटर हर्डल्सको पुरुष र महिला तर्फकै छनोट चरणका खेल हुनेछन् ।
ब्याडमिन्टनतर्फ सिंगल्स र डबल्सका क्वार्टर फाइनलका खेलहरु हुनेछन् । यस्तै क्रिकेटमा पुरुषतर्फ बंगलादेश यू–२३ र माल्दिभ्स तथा श्रीलंका यू–२३ र भुटान प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । पोखरामा हुने महिला क्रिकेटमा बंगलादेश र नेपाल तथा श्रीलंका र माल्दिभ्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
साइकलिङमा डाउनहिल च्याम्पियनसिपको फाइनल हुँदैछ । फुटबलतर्फ आज नेपाल र श्रीलंका प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । खेल नेपाली समय अनुशार साँझ पाँच बजे हुनेछ । पोखरामा हुने महिला फुटबल तर्फ नेपाल र माल्दिभ्सबीच खेल हुँदैछ । गोकर्णमा गल्फका ब्यक्तिगत र टिम इभेन्टका दोस्रो चरणका खेलहरु हुँदैछन् ।
पोखरामा हुने ह्याण्डबलमा पुरुषतर्फ नेपाल र पाकिस्तान खेल्दैछन् भने महिला तर्फ नेपाल र बंगलादेश प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । यस्तै आजै पुरुषतर्फ भारत र बंगलादेश र महिला तर्फ भारत र माल्दिभ्स पनि खेल्दैछन् । यस्तै कराते प्रतियोगिता आजबाट सकिँदैछ । आज ब्यक्तिगत कुमिते तर्फ पुरुषको ५० केजी मुनी र महिलाको ६१ केजी माथीमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यस्तै महिला र पुरुषको टिम कुमितेको फाइनल पनि हुँदैछ ।
खोखोमा महिलातर्फ आज नेपालले स्वर्ण पदकका लागि भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछ । पुरुष तर्फ भने भारत र बंगलादेश स्वर्ण पदकका लागि खेल्दैछन् । सुटिङमा पनि महिलाको थ्री पोजिसन राइफल र पुरुषको एयर राइफलका प्रतिस्पर्धा हुँदैछन् । तेक्वान्दोमा तक्वान्दोमा आज ६ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुँनेछ । पुरुषको ६३ केजी मुनी, ७४ केजी मुनि र ८७ केजी माथिको प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने महिला तर्फ ५३ केजी मुनी, ६२ केजी मुनी र ७३ केजी माथिमा प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।
टेनिसमा आज महिला र पुरुषको टिम इभेन्टका फाइनल हुनेछन् । महिलाको फाइनलमा भारत र श्रीलंका प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् भने पुरुषतर्फ पाकिस्तान र भारत प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ट्रायाथलन अन्तर्गत आज मिक्स रिलेका स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछन् । यस्तै टेबल टेनिसमा पुरुष र महिलाको सिंगल्स तथा डबल्सका खेलहरु संचालन हुँदैछन् ।